1 Ny Wikipedia dia raki-pahalalàna
2 Hajao ny fijerena tsy mitongilana
3 Torolalàna momba ny zom-pamorona
5 Torolalana azo tsy raharahina
Ny Wikipedia dia raki-pahalalàna[hanova ny fango]
Hajao ny fijerena tsy mitongilana[hanova ny fango]
Torolalàna momba ny zom-pamorona[hanova ny fango]
Io lisansa io dia afahana mamorona, mandika, manova ary mizara ny votoatin'i Wikipedia. Ny fepetra mila hajaina dia ny mitazona io lisansa io rehefa mandika, manova sy mizara. Mety ho zarazarain'iza na iza ny lahatsoratra napetraka tato amin'ny Wikipedia, ary mety ampandoavana vola mihitsy aza.
Ny lahatsoratra mitovy lisansa amin'ny wikipedia ihany koa dia azo adika ato, fa tandremo kosa, rarana ato amin'i Wikipedia ny lahatsoratra avy amina tranonkala hafa misy marika copyright (©).
Noho izy ireo mety hampiteraka olana ho an'ny fikambanana, dia ho voafafa avy hatrany izay tahirin-kevitra tsy manaraka izay fitsipika momba ny zom-pamorona.
Fahalalam-pomba[hanova ny fango]
Torolalana azo tsy raharahina[hanova ny fango]
Tsy manana fitsipika hafa ny Wikipedia afa-tsy ireo fitsipika nosoratana ireo.
Aza matahotra manoratra manova sy mamafa pejy ianao. Ovay amin'ny tanjon'ny fanatsaràna ny lahatsoratra hitanao tsy feno. Tsy maninona raha tsy tonga lafatra avy hatrany ny lahatsoratra eto. Rehefa manaraka ny fitsipika sy ny fepetra izy ireo dia azo avoaka eto foana.
Mahasahia manoratra. Aza miandry hahafantatra ny antsipirihan'ny fitsipika vao manomboka: raha misy diso ny ataonao eto, ho voahitsin'ny mpandray anjara hafa izy ireo. Tsy hanakorontana ny fikambanan'i Wikipedia izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fototra_dimy&oldid=1038957"
Voaova farany tamin'ny 14 Oktobra 2021 amin'ny 21:21 ity pejy ity.